Yan Aung: နေသားတကျ...
ပြတင်းတံခါးကိုဖွင့်လိုက်တော့ တစ်ညလုံး သူ့ဆီကို ပြေးဝင်ဖို့ ကြိုးစားနေခဲ့တဲ့ လေပြည်ညှင်းက သူ့မေးစေ့နဲ့ လည်ပင်းကို တိုးတိုးလေး ပွတ်သပ်ကျီစယ်သွားခဲ့တယ်။ အပြင်ဖက်မှာ နေရောင်က ပြည့်ပြည့်၀၀တောင် မထွက်လာနိုင်သေးဘူး။ ကောင်းကင်မှာ တိမ်မည်းညိုတစ်ချို့က ဟိုတစ်ကွက် ဒီတစ်ကွက်နဲ့ မိုးရိပ်ဆင်နေတဲ့ လက္ခဏာတစ်ချို့တော့ တွေ့ရလေရဲ့။ အမှန်ဆို ညက မိုးရွာဖို့ကောင်းခဲ့တာ…
အိပ်ယာခင်းကို သပ်သပ်ရပ်ရပ် ဖြစ်အောင်ပြင်ဆင်ပြီး ဘေးနားက စာကြည့်စားပွဲပေါ်မှာ တင်ထားတဲ့ ဖတ်လက်စ စာအုပ်ကို စာအုပ်စင်ပေါ် ပြန်တင်လိုက်တယ်။ နံရံမှာ ချိတ်ထားတဲ့ ၀ှိုက်ဘုတ်ကို တစ်ချက်လှမ်းကြည့်လိုက်ပြီး ဒီနေ့လုပ်ရမယ့် ကိစ္စတွေကို ပြန်စစ်ကြည့်လိုက်တယ်။ ဖရိုဖရဲဖြစ်နေတဲ့ ဆံပင်တွေကြားထဲ လက်ချောင်းတွေကို ထိုးသွင်းလိုက်ပြီး ဆံပင်တွေကို စုကိုင်သပ်တင်လိုက်ရင်းက ဆံပင်ညှပ်ရင်ကောင်းမလား ဆိုပြီး တွေးမိလိုက်သေးတယ်။
ခေါင်းအုံးဘေးနားမှာ အားသွင်းထားတဲ့ ဖုန်းလေးကို အသာလှမ်းယူလိုက်ရင်းက သူ့ဆီကိုခေါ်ထားတဲ့ နံပါတ်တစ်ချို့နဲ့ ပို့ထားတဲ့ မက်ဆေ့ခ်ျလေးတွေကို ခဏဖတ်လိုက်တယ်။ သူမရဲ့ မက်ဆေ့ခ်ျ တစ်ခုတစ်လေများ အမှတ်မထင် တွေ့ရလိုငြားဆိုတဲ့ မရဲတရဲ မျှော်လင့်ချက်လေးနဲ့အတူပေါ့…
ရင်ဘတ်ထဲမှာ ရုတ်ခြည်းဆောင့်တက်လာတဲ့ နှလုံးသားရဲ့ ပြင်းပြင်းရှရှ ရှိုက်ငိုသံတစ်ချို့က သူ့ဆံပင်တွေကို ခပ်ကြမ်းကြမ်းသပ်တင်လိုက်တဲ့ ညာဖက်လက်တစ်ချက်အဝှေ့မှာ အဝေးကို ပြန်လည်လွင့်စင်သွားခဲ့တယ်။ ရေခဲသေတ္တာကို ဆွဲဖွင့်လိုက်ပြီး အထဲမှာအအေးခံထားတဲ့ ကော်ဖီအေးတစ်ခွက်ကို တစ်ကျိုက်ထဲ မော့သောက်ချလိုက်တယ်။ မျက်နှာသစ် သွားတိုက်ပြီးတော့ ဖိနပ်စင်အောက်ဆုံးမှာ ထားထားတဲ့ စကိတ်ဖိနပ်လေးတစ်ရံကို ဆွဲလို့ လမ်းထိပ်က ပန်းခြံလေးဖက် လမ်းလျှောက်လာခဲ့လိုက်တယ်။
ပန်းခြံလေးထဲမှာ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှား လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နေကြတဲ့ လူကြီးလူငယ်တစ်ချို့ကို တွေ့ရတယ်။ လူငယ်တစ်သိုက်ကတော့ ဘယ်အချိန်ထဲက ရောက်နေကြတယ်မသိ၊ ဘတ်စကတ်ဘော ကစားနေကြတာ တော်တော်လေးတောင် အရှိန်ရနေကြပြီ။ သူတို့ကို ဖြတ်လျှောက်သွားပြီး အခြားတစ်ဖက်မှာရှိနေတဲ့ တင်းနစ်လေ့ကျင့်တဲ့ကွင်းလေးဖက်ကို ဆက်လျှောက်သွားလိုက်တယ်။
ထိုင်ခုံလေးပေါ်မှာ စကိတ်ဖိနပ်လေးကို ခဏတင်ထားလိုက်ပြီး ခြေမြှောက်လက်မြှောက် သွေးပူလေ့ကျင့်ခန်း နည်းနည်းလုပ်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့ ထိုင်ခုံလေးပေါ် ထိုင်ချလိုက်ပြီး စကိတ်ဖိနပ်လေးထဲမှာ ထိုးထည့်ထားတဲ့ ခြေအိတ်လေးကို ဆွဲထုတ်လို့ ခြေသလုံးနားထိရောက်အောင် ဆွဲဝတ်လိုက်တယ်။ စကိတ်ဖိနပ်လေးကို ကြိုးသေချာသိုင်းဝတ်လိုက်ပြီး မတ်တပ်ထရပ်ခါနီးမှာ စိတ်ထဲ စနိုးစနောင့် တစ်ချက်ဖြစ်သွားလိုက်သေးတယ်။
တကယ်တော့ သူက စကိတ်ကို သေချာစီးတတ်သေးတာမဟုတ်ဘူး။ ၀ယ်ထားခဲ့တာကြာပြီ ဆိုပေမယ့် တစ်ခါတလေမှ ထုတ်စီးဖြစ်သလို သေသေချာချာလည်း လေ့ကျင့်သင်ယူထားခဲ့တာ မဟုတ်သေးဘူး။ စကိတ်ဘယ်လိုစီးရတယ်ဆိုတဲ့ ဗွီဒီယိုလေးတွေကို အင်တာနက်မှာလိုက်ကြည့်၊ ဆောင်းပါးလေးတစ်ချို့ လိုက်ဖတ်ပြီး တစ်ကိုယ်တော် လေ့ကျင့်ခဲ့ရတာသာ များတယ်။ အခု စကိတ်မစီးဖြစ်တာ ကြာပြီဆိုတော့ သူစီးနိုင်ပါဦးမလား ဆိုတဲ့ သံသယစိတ်လေးက သူမတ်တပ်မရပ်ခင်မှာ သူ့အတွေးတွေကို လွှမ်းမိုးချုပ်ကိုင်ဖို့ ကြိုးစားလာခဲ့တယ်။
ထီမထင်တဲ့ အပြုံးတစ်ချက်က သူ့နှုတ်ခမ်းထောင့်စွန်းမှာ သွားငြိတွယ်တယ်။
“Why not?” ဆိုတဲ့ ခပ်တိုးတိုး စကားသံလေးနဲ့အတူ သူ မတ်တပ်ထရပ်လိုက်တယ်။
ဟန်ချက်နည်းနည်းပျက်သွားခဲ့တယ်။ ခြေထောက်နှစ်ဖက်ကို အသာလေးချဲလိုက်လို့ ကြက်ခြေခတ်ပုံစံ ရပ်လိုက်ပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်ထိန်းလိုက်တယ်။ ဖိနပ်အောက်က ဘီးလုံးလေးတွေ တစ်လှိမ့်နှစ်လှိမ့် ဆက်လှိမ့်သွားသေးတယ်။ ညာဖက်ခြေထောက်ကို အသာလေးမော့ထောင်လို့ ဘရိတ်ကို ပြန်ဖမ်းလိုက်တယ်။ ခါးကို နည်းနည်းမတ်လိုက်တယ်။ ခြေထောက်နှစ်ဖက်ကို ဘယ်ညာရှေ့တိုးနောက်ဆုတ် နည်းနည်းစီ လှိမ့်ကြည့်လိုက်တယ်။ လက်ခုပ်သံတွေ ကိုယ့်နားထဲ ကိုယ်ပြန်ကြားလိုက်ရသလို ခံစားလိုက်ရတယ်။
ယိုင်လဲချင်သလိုဖြစ်နေတဲ့ စ်ိတ်ကို ပြန်ဆုံးမလိုက်ပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်စိတ်ရှိအောင် ပြန်အားပေးလိုက်တယ်။ “မင်းလုပ်နိုင်တယ်” ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ “ဖြစ်ပါ့မလား. လဲမယ်နော်. ဒူးခေါင်းထိမယ်နော်. ခေါင်းကွဲမယ်နော်.” ဆိုတဲ့ စိတ်နှစ်ခုက သူ့ခြေထောက်နှစ်ဖက် အရွှေ့တိုင်းမှာ အားပြိုင်နေကြတယ်။ တကယ်တော့ မကြောက်တတ်တာမဟုတ်ပါဘူး။ သူကြောက်တယ်။ ဒါပေမယ့် ကြောက်စိတ်နဲ့တော့ သူ့ကိုယ်သူ လွှမ်းမိုးခံမနေဘူး။ မရဲတရဲခြေလှမ်းတွေနဲ့အတူ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အားပေးရင်း သူဆက်သွားနေခဲ့တယ်။
“လဲကျမယ်နော်” ဆိုတဲ့စိတ်က သူ့ကို လဲကျဖြစ်အောင် တွန်းအားပေးနေသလို ခံစားလာရတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အဲဒီ့စိုးရိမ်စိတ်ကပဲ သူ့ခြေထောက်တွေကို ချုပ်ကိုင်ထားသလို ဖြစ်နေခဲ့တယ်။ စိုးရိမ်စိတ်တွေကို ဖြည်းဖြည်းချင်း ဖြေလျှော့ပေးနေခဲ့ရင်းက ငယ်ငယ်တုန်းက လမ်းလျှောက်သင်ခါစ ကလေးငယ်လေးတွေ အကြောင်းတွေးရင်း ကိုယ့်ကိုယ်ကို အားပေးလိုက်တယ်။
ဟိုစမ်းစမ်းသည်စမ်းစမ်း၊ တောက်တောက်တက်တက်၊ ယိုင်တိယိုင်ထိုး လမ်းလေးလျှောက်နေချိန်မှာ လူကြီးဖြစ်တဲ့သူက အရှေ့ကနေ လက်ခုပ်လက်ဝါးလေးတီးရင်း အားပေးနေခဲ့တယ်။ ဖင်ထိုင်လဲကျသွားတဲ့ အချိန်မှာ လာပြေးထူပေးလိုက်၊ လက်လေးတွဲလို့ အသာလေး ကူပြီးလိုက်လျှောက်ပေးလိုက်၊ ဟန်ချက်နည်းနည်း ငြိမ်သွားတဲ့အချိန်မှာ လွှတ်ပေးလိုက်ပြီး ဆက်သွားရဲအောင် အားပေးလိုက်နဲ့ မကြာခင်မှာ ကလေးငယ်လေး အကူအညီမလိုဘဲ တစ်ယောက်တည်း လမ်းလျှောက်လာနိုင်ခဲ့တယ်။
စကိတ်ဖိနပ်အောက်က ဘီးလုံးလေးတွေနဲ့ ကွန်ကရစ်မျက်နှာပြင်တို့ တဂျီးဂျီး ပွတ်တိုက်သံက ခပ်မှန်မှန်လေး ထွက်ပေါ်လာနေခဲ့တယ်။ တင်းနစ်ကွင်းလေးထဲမှာ ဆယ်မိနစ်လောက် ဟိုဟိုသည်သည် စီးကြည့်ပြီး ဘတ်စကတ်ဘောကွင်းဖက်ကို ကူးသွားခဲ့လိုက်တယ်။
ဘတ်စကတ်ဘောကွင်း လေးကွင်းစာလောက်ထဲမှာ နှစ်ကွင်းမှာပဲ လူက ပြည့်နေခဲ့တာဆိုတော့ ခပ်လှမ်းလှမ်းက လူမရှိတဲ့ကွင်းဖက်ကို ဆက်စီးသွားခဲ့လိုက်တယ်။ ကွင်းထောင့်မှာ ထိုင်နေတဲ့ လူငယ်တစ်ချို့က သူစကိတ်စီးနေတာကို ပြုံးစေ့စေ့နဲ့ လှမ်းကြည့်နေကြတယ်။ ဒီလိုမျိုး စီးဖြစ်အောင်၊ စီးရဲအောင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဘယ်လောက်ထိ တွန်းအားပေးခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းတွေကိုတော့ သူတို့နားလည်အောင် ရှင်းပြနေဖို့ မလိုတော့ပါဘူး။ တကယ်တော့ သူများနားလည်အောင် လုပ်ပြရှင်းပြနေဖို့ထက် ကိုယ့်ကိုယ်ကို နားလည်အောင် ကြိုးစားလုပ်ကိုင်နေတတ်ဖို့က ပိုအရေးကြီးတာပဲ မဟုတ်ဘူးလား။
ဘတ်စကတ်ဘောကွင်းက တင်းနစ်ကွင်းထက် ပိုကျယ်တာမို့ သူ့အတွက် ပိုပြီးလှုပ်သာရှားသာ ရှိခဲ့တယ်။ ကွင်းလေးထဲမှာ ဘယ်ကွေ့ညာကွေ့၊ အရှိန်တင်စီး၊ ဘရိတ်အုပ် စတာလေးတွေကို အမျိုးမျိုးလေ့ကျင့်ပြီးနောက် ကွင်းအပြင်ဖက်က အပြေးလေ့ကျင့်နေကြတဲ့ ကတ္တရာလမ်းလေးဖက်ကို ထွက်စီးကြည့်ဖို့ စိတ်ကူးရလိုက်တယ်။
ကွန်ကရစ်မျက်နှာပြင်ကနေ ကတ္တရာလမ်းပေါ်ကို ကူးလိုက်တဲ့ တစ်ခဏမှာ ကြမ်းတမ်းတဲ့ အထိအတွေ့က သူ့ခြေသလုံးတွေထဲ တဒုတ်ဒုတ်နဲ့ စီးဝင်နေခဲ့တယ်။ မျက်နှာပြင်ချောမွေ့မှု မရှိတော့တဲ့အတွက် စကိတ်ဘီးလုံးလေးတွေရဲ့ လှုပ်ရှားမှုက သိပ်မမှန်ချင်တာကို ခံစားသိနေမိတယ်။ ကွန်ကရစ်ခင်းပေါ်မှာ ခြေထောက်တစ်ချက် ရွှေ့လိုက်တိုင်း ဘီးလုံးလေးတွေက ချောချောမွေ့မွေ့နဲ့ ပြေးလွှားသွားတတ်ပေမယ့် ကတ္တရာခင်းပေါ်မှာတော့ သူမှန်းထားတဲ့ အတိုင်းအတာအတိုင်း ဘီးလုံးလေးတွေက မရွှေ့ချင်ကြဘူး။ တစ်ချက်တစ်ချက်ကျရင် ကတ္တရာခင်းပေါ်က ခဲလုံးဗြုတ်စပ်လေးတွေကြားမှာ ဘီးလုံးလေးတွေက နည်းနည်းညပ်ချင်သလိုလို၊ ရပ်ချင်သလိုလို ဖြစ်သွားတတ်သေးရဲ့။
မျက်နှာချင်းဆိုင်က အပြေးလေ့ကျင့်နေတဲ့ တရုတ်မိန်းမကြီးတစ်ယောက်ကို မြင်လိုက်ရလို့ သူစကိတ်စီးနေတာကို အရှိန်လေး နည်းနည်းလျှော့ချလိုက်တယ်။ အဲဒီ့မိန်းမကြီး ဖြတ်သွားတော့မှ ပြန်အရှိန်တင်ပြီး ဆက်စီးနေခဲ့လိုက်တယ်။ အခုချိန်ထိ လဲကျတာမျိုး မရှိသေးတဲ့အတွက် စိတ်ထဲမှာတောင် ခပ်မြောက်မြောက် ဖြစ်သွားချင်လိုက်သေးတယ်။
ဆယ့်ငါးမိနစ်လောက် စီးနေခဲ့ရင်းက ချွေးနည်းနည်းစို့လာတာနဲ့ ဘေးက ခုံတန်းလေးမှာ ခဏထိုင်ချလိုက်တယ်။ သစ်ပင်လေးတွေကြားက ဖြတ်တိုက်လာတဲ့ လေညှင်းလေးနဲ့ သူ့လည်ကုပ်ပေါ်က ချွေးစက်လေးတွေ အထိအတွေ့မှာ အေးခနဲဖြစ်သွားတဲ့ ခံစားချက်လေးကို နှစ်သက်နေခဲ့မိတယ်။
နေလုံးကြီးက တဖြည်းဖြည်း မြင့်တက်လာတာနဲ့အတူ ပန်းခြံလေးထဲမှာ အားကစားလေ့ကျင့်ခန်း လုပ်တဲ့သူတွေလည်း တဖြည်းဖြည်း များလာခဲ့တယ်။ နည်းနည်းလောက် အမောပြေသွားတာနဲ့ ပြန်ထပြီး ကတ္တရာလမ်းပေါ် နောက်တစ်ခေါက် ထပ်စီးလိုက်တယ်။ အနိမ့်အမြင့် မညီမညာဖြစ်နေတဲ့ ကတ္တရာလမ်းပေါ်မှာ စကိတ်စီးရတဲ့ အရသာက ပိုပြီး လက်တွေ့ဆန်သလိုလို ခံစားလာရတာကြောင့် စိတ်ထဲမှာ နည်းနည်းပျော်သလိုလို ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ ခုနက အပြေးလေ့ကျင့်နေတဲ့ တရုတ်မကြီးက လမ်းသွယ်လေးဘေးမှာ သူ့မိတ်ဆွေတစ်ယောက်နဲ့ စကားစမြည်ပြောနေခဲ့တယ်။
သူခြေထောက်တစ်ဖက်ကို အရှိန်လေးနည်းနည်းတင်လိုက်တယ်။ အမှတ်မထင် ခဲလုံးလေးတစ်ခုကို သွားတိုက်မိတယ်။ ဟန်ချက်ပျက်သွားခဲ့တယ်။ ခြေထောက်က ဘေးဖက်ကို ကားထွက်သွားပြီး ခန္ဓာကိုယ်က ချာခနဲ လည်ထွက်သွားခဲ့တယ်။
တရုတ်မကြီးက “အမလေး” လို့ ထအော်တယ်။ တကယ်တော့ တရုတ်လို အော်တာနေမှာပါ။ သူ့စိတ်ကူးထဲမှာတော့ မြန်မာလိုပြန်ပြီး အမလေးအော်တာပဲလို့ တွေးယူလိုက်တယ်။ ကတ္တရာလမ်းပေါ် ဖင်ထိုင်လျက်သားလဲကျနေရင်းက လက်နှစ်ဖက်ကို နောက်ဖက်ထောက်လိုက်ရင်း တရုတ်မကြီးကို မချိသွားဖြဲ ရယ်ပြလိုက်တယ်။ ရင်ခုန်သံတွေကတော့ တဒိန်းဒိန်းနဲ့ရယ်ပေါ့။ တရုတ်မကြီးကြောင့် မဟုတ်ပါဘူး။ ရှေ့ကို ပစ်မလဲဘဲ နောက်ဖက်ကို ပစ်လဲသွားလို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကံကောင်းတယ်ဆိုပြီး တွေးနေမိတာကြောင့်ပါ။
ဟုတ်တယ်လေ။ ရှေ့ဖက်ကို ပစ်လဲလို့ကတော့ သူ့ဒူးခေါင်းနဲ့ တံတောင်ဆစ် တစ်ခုခုတော့ ပွန်းပဲ့မှာ သေချာတယ်။ ကံကောင်းစွာနဲ့ နောက်ဖက်ကို လဲကျသွားတော့ တော်သေးရဲ့လို့ တွေးနေမိလိုက်တယ်။ ငယ်ငယ်တုန်းက သမိုင်းမှာ သင်ယူခဲ့ရတဲ့ ဗြိတိသျှ စစ်တပ်ရဲ့ အောင်မြင်စွာ ဆုတ်ခွာခြင်းဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းကို သတိရမိလိုက်တယ်။
တကယ်တော့ဘ၀မှာ ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက် ကျရှုံးတာမျိုး မဟုတ်ဘဲ အစီအစဉ် ကျကျနန ရှုံးနိမ့်တတ်ဖို့လည်း အရေးကြီးတယ်ဆိုတာ အတွေ့အကြုံနဲ့ရင်းပြီး သိလိုက်ရတယ်။ အရှိန်သိပ်မပြင်းတာလည်း ပါမှာပေါ့လေ။ တကယ်လို့သာ အရှိန်နဲ့ဆိုရင်တော့ သူ့ကိုယ်သူ ထိန်းနိုင်မှာ မဟုတ်တော့ဘဲ ဒီ့ထက်ဆိုးဝါးတဲ့ ရလာဒ်တစ်ချို့ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ ဒါကြောင့် အရှိန်လေးတစ်ခုရနေချိန်ှမှာ ခြေချော်လက်ချော် မဖြစ်ဖို့ ပိုပြီး သတိထားသင့်တယ်လို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတိပေးလိုက်မိပြန်တယ်။
ဖုတ်ဖက်ခါထပြီး ဟန်ချက်ပြန်ထိန်းလို့ သူ့ခြေထောက်တွေကို ခပ်ရဲရဲဆက်ရွှေ့လိုက်တယ်။ တရုတ်မကြီးက စိုးရိမ်စွာနဲ့ ကြည့်နေဆဲပဲ။ သူမ မျက်ဝန်းတွေက သူ့ကို စကိတ်ဆက်မစီးစေချင်တော့တဲ့ အရိပ်အယောင် သမ်းနေခဲ့တယ်။ နောက်တစ်ကြိမ် လဲကျခဲ့ရင်ရော ဆိုတဲ့အတွေးမျိုး သူမခေါင်းထဲ ၀င်ကောင်းဝင်နေနိုင်တယ်။ သူ့အတွက်တော့ လဲကျဖို့ထက် ဆက်ရွေ့နေနိုင်ဖို့ကိုပဲ စ်ိတ်စောနေခဲ့မိတယ်။
နောက်ထပ် ဆယ့်ငါးမိနစ်လောက် အမှားအယွင်းမရှိ စကိတ်ဆက်စီးနေပြီး ကွင်းထဲမှာ ခဏထိုင်ချလိုက်ပြီး အမောဖြေလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ စကိတ်ဖိနပ်ကို ပြန်ချွတ်လို့ ခြေညှပ်ဖိနပ် ပြောင်းစီးပြီး အိမ်ဖက်ကို လမ်းလျှောက်ပြန်လာခဲ့လိုက်တယ်။ တစ်စုံတစ်ရာကို အဖန်တလဲလဲ လေ့ကျင့်ရင်းကနေ ကျွမ်းကျင်တတ်မြောက်လာပြီး တမင်သက်သက် အားစိုက်ထုတ်နေစရာမလိုဘဲ နေသားကျမှု ဆိုတဲ့ အနေအထားကို ရောက်လာနိုင်ပုံကို အိမ်ပြန်လမ်းတလျှောက်မှာ တွေးနေမိခဲ့တယ်။
စကိတ်ဖိနပ်ကို ဖိနပ်စင်ပေါ် ပြန်တင်၊ အခန်းထဲပြန်ဝင်၊ ကွန်ပျူတာဖွင့်လို့ အီးမေးလ်ခဏစစ်၊ ချွေးခဏတိတ်အောင် စောင့်ပြီး ရေမိုးချိုး ကိုယ်လက်သန့်စင်လိုက်တယ်။ ရေချိုးခန်းထဲက ပြန်ထွက်လာပြီးနောက် ဆံပင်ပေါ်တင်ကျန်နေတဲ့ ရေစက်လေးတွေကို မွှေးပွတဘက်နဲ့ ခပ်ကြမ်းကြမ်းလေး သုတ်နေခဲ့ရင်းက ပြတင်းပေါက်အပြင်ဖက်ကို ငေးကြည့်နေခဲ့မိတယ်။
မနက်က မိုးရိပ်ဆင်နေခဲ့တဲ့ တိမ်မည်းညိုတွေ အခုတော့ ဘယ်ဆီလွင့်ပျယ်ကုန်ပြီမသိ။ ခြိမ်း၍မရွာသောမိုးလေလား၊ မခြိမ်းလည်းမခြိမ်း မရွာလည်းမရွာသော မိုးလေလား။ မိုးမင်းကြီးသာ သိပေလိမ့်မည်။
သူ့အတွက်တော့ အလွမ်းတွေနဲ့ နေသားတကျ ရှိနေတတ်ခဲ့ပြီ…
သြဂုတ် (၅) ရက်၊ ၂၀၁၂ ခုနှစ်။ ။
တရုတ်မကြီးနဲ့ ထပ်တွေ့ဖြစ်သေးလား မေးမလို့ပါ...။
အခုလို စာလေးတွေ မကြာမကြာရေးနိုင်ပါစေ...လို့..
တရုပ်မကြီးရဲ့ အကြင်နာအကြည့်လေးတွေ ရလိုက်တာ ကိုရန်အောင် ကံကောင်းလိုက်တာ...:)))
“ရင်ခုန်သံတွေကတော့ တဒိန်းဒိန်းနဲ့ရယ်ပေါ့။ တရုတ်မကြီးကြောင့် မဟုတ်ပါဘူး..” ဆိုတဲ့ နေရာအရောက် ပြုံးမိတယ်။
“ အရှိန်နဲ့ဆိုရင်တော့ သူ့ကိုယ်သူ ထိန်းနိုင်မှာ မဟုတ်တော့ဘဲ ဒီ့ထက်ဆိုးဝါးတဲ့ ရလာဒ်တစ်ချို့ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ ဒါကြောင့် အရှိန်လေးတစ်ခု ရနေချိန်ှမှာ ခြေချော်လက်ချော် မဖြစ်ဖို့ ပိုပြီး သတိထားသင့်တယ်.. ” ဆိုတဲ့နေရာရောက်တော့ စဉ်းစားစရာလို့ သတိချပ်လိုက်မိတယ်။
>အိမ့်ချမ်းမြေ့... တရုတ်မကြီးက အခု ဆောင်းဝင်ပြီမို့ ကျွန်တော်နဲ့ မဆုံဖြစ်တော့ဘူး. Sniff Sniff. :)
>မြသွေးနီ... အရောက်ကိုပို့နေတော့တာပါပဲလား Sis. :D
>misterbrown.... တရုတ်မလေး ဇာတ်လမ်းကတော့ သူလေးက မတင်စေချင်သေးဘူးလို့ ပြောတာပဲ. အဟတ်ဟတ်